တ လောတုန်းက မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေလင်မယား စုံတွဲ ဘန်ကောက်ကို ရောက်လာကြတယ်။ လာရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဇနီးဖြစ်သူကို ဆေးကုသဖို့အတွက်ပါ။ ဘန်ကောက်က ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆေးရုံကြီးတခုမှာ သွားပြကြပါတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ စဖြစ်နေပြီလို့ မြန်မာပြည်ကထဲက ဆရာဝန်ကြီးများ က ပြောပြထားပါ တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မကုသတာက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် မြန်မာပြည်ကဆေးရုံတွေ အထူးကုဆေးခန်းတွေကို မယုံကြည်တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ သူများဖြစ်လေတော့ ကုချင် ကု နိုင်ငံခြားက ဆေးရုံတွေမှာ ခေတ်မီကိရိယာတွေ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့်လည်း ပါနိုင်ပါတယ်။
ဘန်ကောက်ဆေးရုံကြီးက သမားတော်များကလည်း ရင်သားကင်ဆာ စတင်ဖြစ်ဖို့ အလားအလာများနေတယ်လို့လည်း သူတို့ စမ်းသပ်ချက်အရ လူနာရှင်စုံတွဲကို ရှင်းပြပါတယ်။ တိုတိုပြောရရင် ဘန်ကောက်မှာပဲ ဆေးကုသ ခံတယ်။ အော်ပရေးရှင်း လုပ်တယ် ခွဲစိပ်ကုသမှု ခံယူတယ်ပေါ့ဗျာ။ မိတ်ဆွေက အဲသည့်ဆေးရုံကြီးမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ သူ့အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါတယ်။ ကင်ဆာဌာနမှာ လာပြီး စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု ခံယူတဲ့ လူနာတွေထဲမှာတဲ့ ဥပမာ ဆိုရရင် ကင်ဆာလူနာ ဆယ်ယောက်မှာ ရှစ်ဦး လောက်က မြန်မာပြည်သားတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် သူလည်း အတော်လေး တုန်လှုပ်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ ဘန်ကောက်အထိ လာကုတာက အသာထား။ သူဆိုလိုတာက မြန်မာပြည်သား ပိုက်ဆံရှိ သူတွေတောင် ကင်ဆာအဖြစ်များနေတယ်ဆိုရင် လူဆင်းရဲတွေအတွက် ကတော့ မတွေးဝံ့စရာပဲလို့ ပြောရတော့မှာပါ။ ဆေးကုသဖို့ ငွေကြေး မတတ်နိုင်လို့ လူမသိသူမသိ ကင်ဆာနဲ့ သေနေ တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေပြီလဲ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ကင်ဆာရောဂါ အဖြစ်များနေတာလဲ။ တခြား ရောဂါဖြစ်နေတာတွေလည်း ရှိဦးမှာ သေချာပါတယ်။ ဆီးချိုတို့၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ အသဲရောဂါ စသဖြင့် ဖြစ်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နေ့စဉ် ဘာတွေကို စားသုံးနေကြသလဲ။ အဲသည့် နေ့စဉ်သုံးဆောင်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ သဘာဝအတိုင်း ဟုတ်ကဲ့လား။ ဆိုးဆေးအပါအဝင် တခြားသော လူတွေမစားသုံးအပ်တဲ့ ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေ ပါဝင် နေသလား စသဖြင့် စောကြောမိပါတယ်။ ကိုင်း ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နေ့စဉ် ရှောင်လို့မဖြစ်ဘဲ စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် စာရင်းလုပ်ကြည့်ပါ့မယ်။ လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ အချိုခြောက်၊ ချက်နို့ဆီ၊ ဇီးပေါင်း အချဉ်ပေါင်းမျိုးစုံ၊ ငရုပ်သီးမှုန့်၊ ငရုပ်သီးအတောင့်ခြောက်၊ ပဲမှုန့်၊ ဆန်မှုံ့၊ စိမ်းစားငပိ၊ ငပိရည်ကြို၊ ငါးခြောက်မျိုးစုံ၊ ငံပြာရည်၊ အသားခြောက်မျိုးစုံ၊ ဝက်အူချောင်း၊ သကြားအဖြူ၊ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်၊ မုန့်ဟင်းခါးအခြောက်ထုပ်၊ စားအုန်းဆီ၊ စားအုန်းဆီ ရောထားတဲ့ ပဲဆီနဲ့ နှမ်းဆီ၊ ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်ဘီယာမျိုးစုံ၊ စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်။ နောက်တချက်ကတော့ အချိုမှုန့် သုံးစွဲတဲ့ အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ။
ဒါတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ နောက်ထပ်တချက် ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အိမ်သာ စနစ်က ဘယ်အခြေနေမှာ ရှိသလဲ။ ရေဆိုးထုတ်တဲ့ မြောင်းတွေ အလုပ်လုပ်သေးရဲ့လား။ အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနဲ့ လက်ဆေးရမယ် ဆိုတာကို လူတိုင်းလိုက်နာသလား။ ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့ ထမင်းစားတဲ့ အလေ့အကျင့် ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ။ လက်တွေနဲ့ စားနေတဲ့ ရာခိုင်းနှုန်းက မြင့်မားနေတုန်းပဲလား။ အရေးအကြီးဆုံးထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ နောက်တချက် လည်း ရှိပါ သေးတယ်။ အဲတာကတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်ရေကို သောက်သုံးသလား။ ဒီလိုပဲ အနီးအနား ဝန်းကျင်က ရေတွင်း၊ ရေပိုက်ကလာတဲ့ လာတဲ့ ရေကိုပဲ သောက်နေကြသလား။
ပထမဆုံး စောကြောမိတာကတော့ လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ခြောက် (အဖန်၊ အချို) ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ လူတိုင်းနေ့စဉ် ဆိုလို စားမိနေတဲ့ အဟာရတခုပါ။ ဆိုးဆေးတွေပါနေတယ် ဆိုတာကြောင့် ဟိုးတလောကလည်း ပြဿနာတွေ အုပ်သော် သောင်းနင်း ဖြစ်ထားပြီးသား။ သားရေနယ်လုပ်ငန်းမှာ သုံးနေတဲ့ သားရေအရောင်ဆိုးတဲ့ ဓာတုဆေးတွေကို လက်ဖက် အရောင် လှအောင် ထည့်ဆိုး ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲသလိုပဲ လဖက်ရည်အချိုမှာ သုံးနေတဲ့ ချက်နို့ဆီဟာ ကြာရှည်ခံအောင် ဖော်မလင်လို ဓာတုဆေးရည်ထည့်ပြီး ချက်တယ်လို့ သိရတယ်။ နို့ဆီချက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ သကြား ကလည်း စိတ်မချရ ပြန်ဘူး။ သကြားကဖြူဖွေးနေမှ ဈေးကောင်းရမှာ ဆိုတဲ့အတွက် သကြားချက်တဲ့နေရာမှာ ဆာလဖာနဲ့ အရောင်ချွတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ သကြားအညိုက ပိုဈေးကြီးပေးရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။
ဓာတုဆေးဝါးတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အစားအစာတွေ နောက်ထပ် အများကြီး ရှိသေးတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ကလည်း ဖြူနေမှ ဈေးကောင်းဆိုပဲ။ မူလဆန်အရောင်နဲ့ ထွက်လာတဲ့ မုန့်ဖတ်က ဈေးကောင်းမရဖူးလို့ ဆိုတယ်။ ဒါကြောင့် မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ဖြူအောင် ဓာတုဆေးဝါးတွေနဲ့ အရောင်ချွတ်ရပြန်တယ်။ မုန့်ဟင်းခါး အခြောက်ထုပ်လည်း အလားတူပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ ထုတ်လုပ်ထား၍ စိတ်ချလက်ချ စားသုံးနိုင်သည်လို့တော့ အထုတ်ပေါ်မှာ ရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် တာရှည်ခံအောင် ဘာတွေထည့်ထားသလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါ။ ဆတ်သားခြောက်နဲ့ ဝက်အူချောင်း တွေလည်း တာရှည်ခံအောင် ဓာတုဆေးဝါး တမျိုးမျိုး သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သည်လောက်တောတွေ ပြုန်းနေတာ ဆတ်တွေကော တကယ်ရှိသေးရဲ့လား။ ငပိမှာလည်း အလားတူပါဘဲ။ ပုဇွန်ငပိ (သို့) မျှင်ငပိ (သို့) စိမ်းစားငပိ တွေမှာလည်း အရောင်လှအောင် ပန်းရောင်သန်းနေအာင် ဆေးဆိုးထားသလို တွက်ချေကိုက်အောင် ဘာတွေညာတွေ ရောထားတယ် ဆိုတာကလည်း စားချင်လို့သာ စားနေတာ လူတိုင်းသိနေတဲ့ ကိစ္စပါ။ ငရုပ်သီးခြောက်ကရော ဘာထူးသလဲ။ ဖလံဖြူတွေကို ဈေးကောင်းရဖို့ နီနေအောင် ဆိုးဆေးဆိုးလေ့ ရှိပါတယ်။ ငရုပ်သီးခြောက်ရဲ့ နောက်ထပ် ပြဿနာတခုက လူသာမန် မျက်စေ့နဲ့ မမြင်ရတဲ့ မှိုတွေအောင်းနေလေ့ ရှိပါတယ်။ တော်ရုံ မီးအပူချိန်မှာ မသေပါ။ အဲသည့် ငရုပ်သီးက မှိုကြောင့် ရေရှည်စွဲစားမယ် ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသတဲ့။ ငရုတ်သီးစိမ်း လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် ရှာစားနိုင်ရင်တော့ ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရေကြိုငပိကလေးများကော ဆိုးဆေးဆိုးတဲ့ အထဲကလွတ်မလား မှတ်တယ်။ ဟိုတလောက သတင်းတွေထွက်လာ တော့မှ အမလေးဗျလို့ အော်ရပါတော့တယ်။ ရေကျိုငပိ သိပ်တဲ့အချိန်ကနေ ဈေးကွက်တင်တဲ့အထိ အချိန် သုံးလလောက် လိုတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကို သုံးလအထိ မစောင့်နိုင်တဲ့ ရေကျိုငပိ ပြုလုပ်သူများက ငပိလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ယူရစ်အက်စစ် တမျိုးကို ထည့်လုပ်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အဲသည့် ယူရစ်အက်စစ်ကြောင့် သိပ်ထားတဲ့ ငပိရေကျိုဟာ ခွန်နှစ်ရက်အတွင်း ငါးရိုးတွေပါ နူးလာတာကြောင့် ဈေးကွက်ကို တင်လို့ ရသွားပါတယ်။ သုံးလအထိ စောင့်စရာ မလိုတော့တာမို့ ငွေမြန်မြန် ပေါ်တာ ပေါ့လေ။ အဲ စားသုံးတဲ့ သူတွေဖက်ကတော့ မသာမြန်မြန်ပေါ်တာပေါ့။
အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး စားသောက်ကုန်ကတော့ စားအုန်းဆီပါပဲ။ ကျနော်တို့ အိမ်နီချင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ အဲသည့်အုန်းဆီကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဓာတ်ဆီအစားထိုး ဘိုင်အိုဒီဇယ် ထုတ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စားဖို့အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ဆပ်ပြာဘာညာ ချက်တဲ့နေရာမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စားအုန်းဆီဆိုတာ မရှိဘူးမဟုတ်ပါ။ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးကြောထဲမှာ အဆီတွေများများ ပွားများမလာနိုင်အောင် ခေတ်မီ နည်းတွေနဲ့ အထပ်ထပ် စစ်ထုတ်ယူပြီးမှ အရည်အသွေး အစစ်အဆေးခံပြီးမှ ဈေးကွက်ကိုရောက်ပါတယ်။ ဒီလောက် လုပ်ထားပြီးတာတောင် စားအုန်းဆီဟာ နေ့တိုင်းမစားအပ်ဖူးဆိုတာ တဖက်ကလည်း ပညာပေးနေပါတယ်။ နေကြာဆီ၊ ပဲပိစပ်ဆီ စတာတွေကိုပဲ သုံးဖို့ဆိုတာကို လူတွေကလည်း နားလည်ကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သားများကတော့ ဒီဇယ်ချက်မယ့် အုန်းဆီတွေကို စားအုန်းဆီ နာမည်တပ်ပြီး စားနေကြရပါတယ်။ ဆင်းရဲကုန်တာကိုး။ နောက်မှ သေသေ ကင်ဆာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှလုံးရောဂါပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ငင်းမှာတော့ ဈေးပေါတဲ့ စားအုန်းဆီကိုပဲ ရွေးချယ်ကြရပါတယ်။
နောက်ထပ် အဆိုးဆုံးတခုကတော့ ပြည်တွင်းဖြစ် အရက်မျိုးစုံနဲ့ ဘီယာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ သုံးနေတဲ့ ဓာတ်မြေ သြဇာတွေကို အရက်ချက်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ရိစ်ဖောက်တဲ့ ကာလ အတော်ကလေး တိုတောင်းသွားပြီး အရက်ကို မြန်မြန်ချက်လုပ် နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်တဲ့ ကာလအထိ မကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ အငွေ့ပျံအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုတော့ဘဲ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဈေးကွက်မှာတင်ပါတယ်။ အဲသလိုမျိုး အရက်တွေကို နေ့စဉ်သောက်သုံး သူတွေ မြန်မြန်ကိစ္စချောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခု လူတွေပြောနေတဲ့ အထဲမှာ ဘယ်အရက်မျိုး သောက်ရင် ဒါကတော့ နှစ်နှစ်ခံ၊ ဘယ်အရက်မျိုး ဆိုရင်တော့ ဒါကငါးနှစ်ခံ စသဖြင့်တောင် ပြောစမှတ် ပြုလာရပါတယ်။
အဆိုးတကာ့ အဆိုးဝါးဆုံး နောက်ထပ် ပြဿနာ တခုကတော့ သောက်ရေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ပြည်ရဲ့ လူဦးရေ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းဟာ သန့်ရှင်းစိတ်ချရတဲ့ သောက်ရေကို သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ။ တာဝန်ရှိသူများ သိကြပါရဲ့လား။ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်ရေဆိုတာ ဒီလိုပါ။ ရေထဲမှာ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကို သန့်စင်ပြီးမှသာ သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒို့ရွာမှာတော့ ဒီရေတွင်း တသက်လုံး သုံးလာတာပဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဆိုတာလောက်နဲ့ မရပါဘူး။ ရေထဲမှာ ကန့်ဓာတ်၊ ခဲဓာတ်နဲ့ တခြားသော လူကိုအန္တရာယ် ပြုနိုင်တဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကို သန့်စင်ပစ်ဖို့ပါ။ ရေကိုကြိုချက်လိုက်ပေမယ့် အဲသည့် ဓာတ်တွေဟာ ပျောက်ပျက် မသွားဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေရဖို့ ဈေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ ထင်စရာ ရှိပါတယ်။ အမှန်ကတော့ သန့်ရှင်းတဲ့သောက်ရေ ရရှိဖို့ စစ်စစ်မှန်မှန် ကူညီပေးမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းဖြစ် ဒေသတွင်းဖြစ် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ပေးလိုတဲ့ စေတနာ ရှိမရှိဆိုတာကသာ အဓိကပါ။ ဆေးလိပ်ကတော့ ကနေ့ တကမBာလုံးမှာ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားမို့ ထပ်လောင်း မပြောတော့ပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကနေ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စားသောက်နေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ လူတွေမစားသုံး အပ်တဲ့ ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေ ဘယ်လောက်ပါဝင် ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါပြီ။ တခါတခါ အမြင်မတော်လောက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာမှ အသံတွေ ကျယ်လောင်လာမှ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စကို အစိုးရက စစ်ဆေးတာမျိုး ပြုလုပ်တာ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စမျိုးက အစဉ်တစိုက် ဓာတ်ခွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း စသဖြင့် ပြုလုပ်နေရမှာ ဖြစ်သလို ဓာတုဆေးဝါး ထည့်သွင်းထားတဲ့ အစားအသောက် ထုတ်လုပ်သူများကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ လိုနေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာတုန်းက ကလေးတွေကို တိုက်တဲ့ နို့မှုန့်နဲ့ နို့တွေထဲမှာ မယ်လမင်းဓာတ် ထည့်သွင်းထားတာ တွေ့လို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက တာဝန်အရှိဆုံးသူကို သေဒဏ်ပေးတဲ့အထိ အရေးယူခဲ့တာ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။
တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနည်းပါးမှု၊ အိမ်သာစနစ် မကောင်းမွန်မှု၊ ရေနုတ်မြောင်းနဲ့ အညစ်အကျေး စွန့်ပစ်မှုစနစ် ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးမှု ဒါတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်တော့ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ ရောဂါတွေရကြ သေဆုံးကြ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရတာဝန် ရှိသူတွေရော၊ ပါလီမန်က အမတ်မင်းတွေရော ကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အလေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ပါလီမန်ထဲမှာ ထိုင်နေတယ် ဆိုတာ အမြင့်နိုင်ငံရေးတခုထဲ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကျန်းမာဖို့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ကိစ္စတွေကိုလည်း အလေးထား ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်း မနေသင့်ပါ။ ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘားမားလို့ မသုံးနှုန်းရ၊ မြန်မာလို့ဘဲ သုံးနှုန်းရမယ် ဆိုတဲ့ အငြင်းအခုံတွေဟာလည်း အချိန်ဖြုန်းနေတာလို့ ပြောခြင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ဘာသာဗေဒ ကိစ္စသက်သက်လို့ပဲ ကျနော်ကတော့ မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် ရေးရင် ဘားမားလို့ သုံးပြီး၊ မြန်မာလို ပြောရင်ရေးရင် မြန်မာလို့ပဲ သုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးကို မြန်မာလို ပြောရင် မန်းလေး၊ မန်းဒလေးလို့ အသံထွက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ ကြုံလာရင် မဲန်းဒလေး လို့အသံထွက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာလို့ မမြင်ပါ။ မြန်မာတွေလည်း ဘရစ်တင် ဆိုတဲ့ အသံထွက်ကို ဗြိတိန်လို့ ရေးတာပဲ မဟုတ်လား။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ပါလီမန် မြန်မာလိုတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာထဲအထိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ပါလီမန်လို့မရေးဘဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်းတဲ့အထိ လုပ်နေကြတာဟာ အရုပ်ဆိုးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တပ်မတော်ကိုလည်း အာမီလို့ မရေးဘဲ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းနဲ့ တပ်မတော် ဆိုပြီးရေးနေ ကြတာတွေဟာ အလွန်အကျွံ မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်လား၊ အဖားလွန်တာလား ဆိုတာကတော့ ပြုမူသူတွေသာ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထိုင်းလူမျိုး တဦးကို နိုင်ငံခြားသားတဦးက ခင်ဗျားဘယ်သွားမလို့လဲလို့ အင်္ဂလိပ်လို မေးလိုက်ရင် အဲသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားက ဘန်ကောက်သွားမယ်ဆိုရင် ဘန်ကောက်သွားမယ်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ဖြေပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာ စကားမှာ သူတို့မြို့တော် ဘန်ကောက်ကို ထိုင်းစကားနဲ့ ဘန်ကောက်လို့ မခေါ်ပါဘူး။ “ခရုန်ထစ်ပ်” လို့ပဲ အသံထွက်ပါတယ်။ ထိုင်းအချင်းချင်း ပြောနေတယ်ဆိုရင် “ခရုန်ထစ်ပ်” လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ဘန်ကောက်လို့ မပြောပါဘူး။ တီဗွီတွေမှာ ထိုင်းဘာသာနဲ့ သတင်းကြေညာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဆိုရင် “ခရုန်ထစ်ပ် မဟာနခေါင်” လို့တရားဝင် သုံးစွဲပါတယ်။ တခါ ခရုန်ထစ်ပ် လို့မခေါ်ဘဲ ဘန်ကောက်လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်း စိတ်မဆိုးပါဘူး။ မည်သူမဆို နိုင်ငံခြားသားပဲ ဖြစ်ပါစေ ဘန်ကောက်လို့ မခေါ်ဘဲ ခရုန်ထစ်ပ်လို့ပဲ ခေါ်တွင်ရမယ်လို့ ဖိအားမပေးပါဘူး။ နိုင်ငံခြား သံရုံးတွေကိုလည်း အော်ချက်ထုတ် တာတွေ စာပို့သတိပေးတာတွေ မလုပ်ပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ထိုင်းလိုပြောရင် “ပရာထစ်ထိုင်း” လို့ပြောပါတယ်။ အကယ်၍ ထိုင်းလူမျိုးတဦးဟာ အင်္ဂလိပ်လို စကားပြောရတဲ့ အခြေအနေတခုမှာ သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောရင် “ထိုင်းလဲန်း” လို့ပြောပါတယ်။ “ပရာထစ်ထိုင်း” က လာပါတယ်လို့ မပြောပါ။ ပြောရင်လည်း နိုင်ငံခြားသားတွေအဖို့ နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းကထဲကစလို့ သူ့ဟာနဲ့သူ ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းကိစ္စ၊ ဘာသာစကားကိစ္စ တွေကို နိုင်ငံရေးထဲ ဆွဲသွင်း လာတာကသာ ပြဿနာလို့ မြင်ပါတယ်။
အကြံပေးလို တာကတော့ ရောင်တဲ့နေရာကို ဆီလူးကြပါ။ မရောင်တဲ့နေရာကို ဆီလူးပြီး အချိန်တွေ မဖြုန်းကြပါနဲ့လို့။ မိမိ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ နိုင်ငံသားတွေ လိုအပ်နေတာတွေကို ဖြည့်ဆီးပေးပါ။ ကူညီပေးပါ။ တနေ့တခြား ကျန်းမာရေးမှာ ချို့တဲ့၊ လူမှုရေးမှာ နိမ့်ကျ၊ ပညာရေးမှာ စကောစက ဖြစ်လာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား လူများစုကြီးရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါ။ သူသာ အမျိုးချစ်တယ် ငါသာအမျိုးချစ်တယ် ဆိုတဲ့ အငြင်းအခုံတွေထဲမှာ ပျော်မွေ့မနေကြဖို့ ထပ်လောင်း ပြောလိုပါတယ်။
Posted by ရွက်မွန် at 10:17 AM
အလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးပြုဆောင်းပါး လေးပါ။ တိုင်းပြည်ချစ်သူတိုင်းဖတ်သင့်ပါသည်။ အစားအသောက်ပြုလုပ်သူများလိုက်နာသင့်ပါသည်။ ပြည်သူတွေကိုအစာတွေထုတ်လုပ်ပေးနေသလား အဆိပ်တွေလုပ်ပေးနေသလားဆိုတာစမ်းစစ်ကြဖို့လိုပါတယ်။
ဆောင်းပါးကောင်းလေးပါ ကိုဇော်မင်း။ ဘားမား မြန်မာအခေါ်အဝေါ်ကတော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြောထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်နော်။ တခြားရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမို့ အဲဒီဘက်ကနေ အမြင်တမျိုးလေးနဲ့ ပြုစုရေးသားပါဦး။ လေးစားလျှက်ပါ။
"ကျနော်တို့ မျိုးဆက်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် ရေးရင် ဘားမားလို့ သုံးပြီး၊ မြန်မာလို ပြောရင်ရေးရင် မြန်မာလို့ပဲ သုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။" I don't think this is correct! In paper work, Nation : Myanmar, Race : Burma. Check other governments' official sites & newspaper. Don't want to argue, but I think Burma is informal usage.